Icashile, Ivulekile, 1BR Apt W/HotTub Near Park
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Pete & Barbi
Ithule futhi ibe yodwa, leli fulethi elilodwa lokulala (810 sq. ft.) liyindawo ekahle yokucasha yalabo abafuna indawo enokuthula yokuphumula. Ivulekile futhi inethezekile, ifika iphelele nekhishi, izinsiza ezibalulekile, i-Ziply fiber optic WiFi, 55” Roku TV, kanye nomgodi womlilo ongasemuva. Futhi, zonke izivakashi zethu zikhuthazwa ukuba zicwiliswe kahle kubhavu oshisayo opholile ngaphandle!
Ukude nje ikhilomitha noma amabili ukusuka eMingus Park, eCoos Bay Waterfront, naseMill Casino. Futhi kuphela amamayela angu-8-12 ukusuka ogwini lolwandle!
Indlu ibekwe endaweni eseceleni yeMyrtle Avenue. Paka imoto yakho eduze kwegalaji endaweni yakho yokupaka yangasese. Uma uhamba egcekeni, uzobona izici eziningi eziklanyelwe ukwenza ukuhlala kwakho kujabulise nakakhulu ngaphambi kokungena ku-suite!
~indawo yokupaka yangasese
~Indawo yokuhlala yesitayela se-cafe yekhofi yasekuseni noma ingilazi yewayini kusihlwa
~itafula lokhuni nezihlalo zesitayela sepikiniki libalele
~umgodi womlilo wamatshe ulungele ukosiwa ama-marshmallows njengoba ilanga lishona (izinkuni azinikeziwe)
~ubhavu opholile wokuqeda usuku
Njengoba ufaka usebenzisa ikhodi yakho yokuvikela yomuntu siqu, sicela ukuthi ukhumule izicathulo zakho futhi uzishiye ethreyini ehlinzekwe ngaphakathi komnyango ongaphambili. Sithemba ukuthi uzokujabulela ukuhlobisa kwe-minimalist. Sizizwa sincipha imfuhlumfuhlu kusho ukucindezeleka okuncane.
Ekamelweni lokuphumula, susa umthwalo ezinyaweni zakho futhi uphumule kusofa okhululekile. I-55” Roku TV inikeza kokubili ukuzijabulisa kwevidiyo nomsindo. Futhi usofa uyaphuma ukuze ulale izivakashi ezimbili ezengeziwe!
~usofa we-queen size sleeper one-ottoman namatafula okuphela
~ukukhanyisa phezulu kanye nesibani saphansi
~amawindi amakhulu okukhanyisa kwemvelo
~55” I-Roku TV w/remote ifaka i-Netflix, i-Hulu, i-Prime Video, ne-Sirius XM
~imidlalo efana neScrabble, Yahtzee, Uno, Pictionary, chess - ngisho noMh-Jongg!
~I-Quadra-Fire CB 1200 isitofu sepellet yezinkuni
Indawo yokudlela isuka egumbini lokuphumula, yona iholela ekhishini elihlome ngokuphelele. Kokubili kunesikhala esanele sokwenza ukupheka okunethezekile nokudla.
~Itafula legumbi lokudlela laba-4 elinezihlalo
~Isiqandisi esigcwele usayizi ogcwele
~indawo enkulu yokubala
~Betty Crocker umenzi wekhofi
~B&D isitayela se-retro toaster
~amabhodwe, amapani, nezitsha zokupheka
~izinto zokudla nesiliva
~I-pantry egcwele izithako eziyisisekelo (ikhofi, itiye, usawoti, upelepele, izinongo, njll.)
Igumbi lokulala elikhulu elibanzi linikeza indawo eningi yokuphumula ngaphandle kokuzizwa kuminyene. Isikhala esanele sekhabethe nekhabethe sigcina izinto zakho zingahlanganisi phansi. Indawo eningi ye-yoga ekupheleni kombhede!
~ 165 sq ft Igumbi lokulala elikhulu
~ama-dual closets w/izitendi zemithwalo
~umbhede wosayizi wendlovukazi w/amadrowa ahambisanayo
~izibani zetafula zokufunda ebusuku
~isibuko esigcwele ubude
~ukukhanya kwefasitela phezulu nokukhanya kwemvelo
Igumbi lokugezela eligcwele linakho konke obungakudinga ukuze uzilungiselele ukuqala usuku olusebenzayo. Kufanelekile futhi ukuba yindawo yokugcina ngaphambi kokungena embhedeni kusihlwa.
~ usinki wezinyawo
~esikhulu (37”x 35”), isibuko esikhanyiswe kahle
~amathawula amaningi nezindwangu zokuwasha
~stone tile shower enekhanda le-Water Pik sprayer
~i-shampoo, i-conditioner, ukugeza umzimba kuhlinzekiwe
~Isomisi sezinwele se-ConAir ngokunamathiselwe kwi-imeyili
I-Wifi – 49 Mbps
4.93(89 okushiwo abanye)
4.93 · 89 okushiwo abanye
I-Sweet Myrtle Suite itholakala cishe ngamamayela angu-2 enyakatho yedolobha laseCoos Bay endaweni yaseMilner Crest Heights. Ibanga elingaphezu kwekhilomitha kunendawo eyingqophamlando iMingus Park - hamba kahle wehle intaba bese uthi sawubona emadada!
Ukushayela imizuzu engu-20 yikho kuphela okukuhlukanisayo noLwandlekazi i-Pacific. Iya enyakatho nje phezu kweMcCullough Bridge (indawo ekhangayo) eHorsfall Beach. Jabulela ukushona kwelanga lapho noma ezansi eningizimu lapho i-Bastendorff kanye ne-Sunset Beaches zinikeza ubuhle obufanayo. Futhi ungaphuthelwa yithuba lokubona amagagasi ephahlazeka e-Shore Acres uma ungakwazi ukukusiza. Ngeke uxole.
Abafuna ukuzijabulisa bangase bafune ukuphenya i-ATV kanye nenqola yendunduma egibele i-Oregon Dunes edumile. Kunenqwaba yezinsizakalo eziqashisayo ezifana ne-Spinreel engakunikeza zonke izisetshenziswa ozozidinga ukuze ube nohambo olujabulisayo noluphephile.
I-Coos Bay iyitheku elikhulu kunawo wonke e-Oregon, futhi yaziwa ngokudla kwayo kwasolwandle okuvunwa endaweni. Eningizimu-ntshonalanga kukhona iCharleston - ngokungangabazeki inhlokodolobha yendawo yokudla kwasolwandle. Lapho ungathenga izibiliboco ezisuka olwandle, noma ugibele usuka edokini ngokwakho! Uma ufuna ulwazi olugxile olwandle, i-Charleston yindawo yakho.
Eduze kancane nasekhaya, ungathola izitolo nezindawo zokudlela eziningi eduze kwe-Broadway (Hwy 101) esifundeni esisenkabeni yedolobha. Kusukela ezitolo ezinkulu ezincane nezitolo zakudala kuya ezitolo zefenisha nezingubo, i-Coos Bay cishe inakho okufunayo - okujabulisayo kusekutholeni. Futhi uma ulambile, akukho nokushoda kwezindawo zokudlela. Izintandokazi zethu zifaka i-Noster Kitchen, i-Kaffe 101 ne-Restaurant O - kodwa ungakuvumeli lokho kukuvimbele ekuhloleni!
Ibungazwe ngu-Pete & Barbi
Thinta u-Pete noma u-Barbi okungcono nge-AirBnB. Sihlala esitezi esiphezulu futhi siyatholakala nganoma yiluphi usizo ongase uludinge.
UPete & Barbi Ungumbungazi ovelele